🥇 ▷ Tani waa quruxda quruxda badan ee Radeon RX 5700 (XT) Elud oo ka socota MSI ✅
Tani waa quruxda quruxda badan ee Radeon RX 5700 (XT) Elud oo ka socota MSI
THE MSI waxay isu diyaarineysaa inay suuq geyso guddiyadeeda caadiga ah ee ugu horreeyay ee xulashooyinka cusub ee VGA ee laga bilaabo OMG, The Radeon RX 5700 iyo 5700 XT. Sida ay sheegayaan wararka xanta ah, noocyadan aan tixraaca ahayn ee MSI ayaa ku dhici doona suuqa Khamiista. Moodooyinka ku dhufan doona suuqa waa qeyb ka mid ah sadarka Mech iyo Evoke.
Moodooyinka ugu xiisaha badan waa guddiyada ‘MSI’ oo ka socda laynka Egga. Waxay heleen PCB gaar ah iyo nidaam qaboojiye oo laba-taageere weyn ah, gurigiisa kaas oo ka samaysan bir bir kuna rinjiyeeyay midab dahabi ah. Galka dhabarku sidoo kale waa dahabi. Guddidu waxay u baahan tahay laba iskuxiran 6-pin iyo 8-pin oo isku xidha korantada waana mid warshadeysan. Saacadda kobcintu waxay gaartaa 2049 MHz – 144 MHz oo ka koreysa qaabka tixraaca.
VideoCardz wuxuu kaloo hellay sawirro laga soo qaaday moodooyinka Radeon RX 5700 iyo RX 5700 XT Mech. Waxay ku qalabeysan yihiin lahaansho TorX 3.0 dual-fan qaboojiyayaal oo u eg nidaamka qaboojinta ee kaararka sawirrada MSI GeForce RTX / GTX Ventus. GPU-yada hawlgallada joogtada ah lama shaacin. Waad u adeegsan kartaa HDMI 2.0 iyo DisplayPort 1.4 (x3) dekedaha si aad u muujisid muuqaalka.
Kaararka cusub ee AMD, xariiqda Radeon RX 5700, waxay ku saleysan yihiin microarchitecture cusub, the 7nm RD based based. Waxay ballanqaadeysaa 25% wax qabad dheeraad ah iyo 50% waxqabad dheeraad ah halkii watt marka loo eego Graphics Core Next (GCN).
Ka faa’iideysiga kuwa cusub Ryzen 3000, oo loo adeegsaday isku xirka X570 motherboards, waxay bixiyaan PCI-Express 4.0 waafaqid, khadka RX 5700 ayaa sidoo kale taageera baska. Ka sokow kaararka fiidiyowga, baska cusub wuxuu sidoo kale ka faa’iideystaa dhammaan noocyada cusub ee SSDs kaasoo lahaan doona xitaa akhris ka sarreeya iyo qoritaanka heerar ka badan PCIe 3.0. Waqtigan xaadirka ah, Aorus NVMe Waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan, oo ku yaboohay 5,000 MB / s oo isku xigxig wax akhris ah iyo 4,400 MB / s isku xigxig qoris ah.
PowerColor, Yeston iyo XFX Showcase Aayado Lagu Sameeyay Radeon RX 5700
Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC wuxuu ku dhuftay suuqa